Waa Maxay Sababta Dadka Qaar Mark Ay Hurdaan Ay U Dhareeriyaan (Can-Dareero)? – Tusmoonline.com
Dhacdooyinka Wararka	December 18, 2016	116	Like
Sida aynu marar badan aragno waxaa dhacda in dadka qaar marka ay seexdaan uu dhareer badani ka yimaaddo afkooda inta ay hurdaan. Waxa aynu u naqaannaa Can-dareero, oo qofku marka uu hurdo dheer seexdo ayaa aad loogu arkaa, waxa aynu u naqaannaa in ay tahay arrin iska caadiya, laakiin xaqiiqada cilmiga caafimaadku sheegay ayaa ah in arrintani ay astaan u tahay mushkilad caafimaad.
1. Xasaasiyadda: Dadka qaba xasaasiyadda sanka, calaamadaha lagu arko ayaa ay ka mid tahay in ay habeenkii dhareeriyaan. Sidoo kale nooca xasaasiyadda ka mid ah ee loo yaqaanno xasaasiyadda cuntada ayaa ka mid ah sababaha dhareerka badan ee habeenkii keenta.
2. Asiidhka caloosha: Asiidhka caloosha, ama waxa aynu u naqaanno Gaasta ayaa ay dhakhaatiirtu sheegeen in ay keento hungurigu sameeyo dhaqdhaqaaq isaga oo tusaale ahaan isku dayaya in uu celiyo asiidhka uu ka baqo qabo in ay caloosha ka soo noqoto oo dhuunta soo gaadho. Dhaqdhaqaaqaas ayaa sababa in qanjidhada dhareerkuna u qaataan in la gaadha ywaqtigii shaqadooda loo baahnaa oo ay soo daayaan dhareer fara badan.
3. Sanboorka: Inta badan marka uu jiro caabuq dhinaca hab-dhiska neefsiga ahi waxa uu saamayn ku wada yeeshaa neefsiga iyo liqidda cuntada. Sidaa awgeed qofka marka ay cilladi caafimaad darro ku jirto hab-dhiska neefsiga waxaa dhacda in qanjuhu ay dhareer dheeraad ah soo saaraan, taas oo marka dambe gaadha in afka uu dhareerku ka soo daato, badashada uu batay awgeed. Marka uu qofka sanboorku ku kacsan yahay waxaa xidhma sanka, xaalado kale oo cabudh keenaana waa ay jiraan. Marka uu cabudhkaasi jiro qofku waxa uu neefsiga u duwayaa afka, afkaa uu ka neefsanayo ayaana keenaya in dhareerku bato oo aakhirka afka ka soo dareero marka uu qofku hurdo.
4. Qanjo xanuunka: Kaarka badan iyo bararka qanjaha hunguriga ku yimaadda marka ay bukaan ayaa sabab u noqda in dhareerku si fiicanu wada dhaafi waayo si qofku u liqo,sidaaawgeed waxauu ku ururaa hunguriga hoostiisa, waxa aanu aakhirka keenaa in uu fataho oo qofku marka uu hurdo dhareeriyo.
5. Saska iyo cabsida hurdada dhexdeeda. Dhareerku in uu qofka ka dareero marka uu hurdaa waa calaamad muujin karta in uu riyo xun iyo argagax ku dhex jiro, waxa ay xaaladdani inta badan ku dhacdaa dadka waaweyn, waxa aana aalaaba keena xaalado nafsiya.
6. Dawooyinka qaar: Dhareerka habeenkii qofka ka dareera waxyaabaha keena waxaa ka mid ah dawooyinka noocyo ka mid ah, sida dawooyinka qofka xaaladaha nafsiga ah ku jira lagu dejiyo, maandooriyaha ayaa isna keena, dawooyinka kale ee keeana waxaa ka mid ah Morphine ta iyo Pilocarpine.